Mac vatambi, zvinopesana nekutenda kwakakurumbira, vane akawanda emitambo yepamusoro misoro yekusarudza kubva mazuva ano - zvirokwazvo, chikamu chakaomesesa kudzikisira sarudzo, uyezve kuwana mari yekutenga uye nguva yekuzvitamba. Verenga zvinotevera: Mitambo yakanakisisa yemak Mac
Hatigone kubatsira neyekupedzisira, asi dambudziko rekutanga riri kumusoro kwenzira yedu. Isu takaunganidza zana nemakumi mashanu nemashanu akanakisa emitambo yeMac pakutora kwako, tichivagovanisa kuitira mukana muzvikamu zvinomwe. Sarudza yako yaunofarira genre kubva pane yakanyorwa pamusoro uye svetukira mukati.
Pano, zvino, ndiyo mitambo yakakura yeMachere kunze uko, pamwe chete, iyo inowanika, inobatana ne-zvakadzika Macworld kuongorora uye zvinyorwa muMac App Store kana Steam, saka unogona kuzvitenga pakarepo. (Uye kana iwe uchida rubatsiro rwekuwana mazano akanaka pane Mac Mac Store, edza iyi tutorial: Nzira yekuwana nayo yakanakisa mapurogiramu pa Mac Mac Store.)
Verenga zvinotevera: 10 nzira dzekumisa mitambo inokanganisa Mac | Nzira yekugadzira Mac yemitambo
Rleplaying games (RPGs)
kambani: Napoleon Games
Kwatenga: Mac App Store or chiutsi
zvinodiwa: Mac ne OS X v10.8, 1.6GHz dual-core Intel processor, 512MB VRAM
mutengo: £ 13.99 (Mac App Store) kana kuti £ 10.59 (Steam)
Yakaburitswa maMacs, maPC uye maApple madhizai panguva imwe chete, 7 Mages ndeimwe yezvakawanda zvakaburitswa izvo zvinodzosera kumashure kumazuva eakare-chikoro maRPG senge Baldur's Gate. Kutaura chokwadi, iyo slim storyline inoshaya kudzika kweaya ekare echinyakare, asi 7 Mage achiri kushanda seanonakidza mugomba anokambaira anokupa iwe yakawanda mhuka, mapuzzle uye loot yekutamba nayo.
Varimi vanogara pachitsuwa cheRoven vanokombwa nevapambi, saka vanokuhaya iwe neshamwari dzako kuti muvadzivirire. Ndiyo nyaya yechinyakare yeVanomwe Samurai, hongu, asi nevaroyi, varwi uye nhunha kutsiva samurai.
Yekutanga-munhu maonero ekuona haina kujairika pamutambo-wekutamba mutambo wakadai, uye pakanga paine nguva apo isu taizoda yakawanda tsika yechinyakare maonero kutibatsira kuronga bato redu mukati meimwe yehondo huru. Neraki, mutambo unoshandisa iyo-inotenderera-kurwa kurwisa system, kuti iwe utore nguva yako kuronga yako zano, uye kusarudza yega yega hunhu zvimiro kana kurwisa kugona. Uye nepo mamwe emakorido ekutanga ehusungwa aunotsvaga anogona kuita kunge asina kujeka, kune dzimwe nzvimbo dzinotyisa uye dzemuchadenga, senge Guta ReBfupa uye Iyo Tembere Yehusiku, izvo zvinokwevera iwe muchiito. Kanda mune imwe yekushamisira poindi-uye-tinya mapuzzle, uye iwe une chinonakidza chidimbu chekare-chikoro kutamba mutambo kunyudza mazino ako mukati.
Mhinduro yeMac yemutambo inodhura zvishoma kudarika £ 10, asi iyo iOS version inokurega iwe kutamba zvimwe zvezvikamu zvekutanga zvekare uye wotenga mutambo wose we £ 6.99, saka iwe unogona kuedza nguva dzose usati wasarudza kana uchida kuenda mberi nekuongorora zvose zvakavanzika zveRoven. Cliff Joseph
Verenga zvinotevera: Best mitambo yebhodhi
Kwatenga: Albion Online
zvinodiwa: Mac ne OSX 10.7, Intel kana AMD mifananidzo, 4GB memori
Price: Kubva ku $ 30
Pakutanga kuona, Albion Online inonzwika senge mumwe mutambo we'yakavhurika yepasi ', paunenge wakasununguka kutenderera nekutenderera kune moyo wako. Uye ichokwadi zvakakwana - asi mutambo zvakare unotora iyo 'sandbox' nzira kusvika kune yakanyanyisa iyo isu taisawanzo kuona pamberi.
Kutanga semunhu mutsva uyo achangosvika pachitsuwa chengano cheAlbion, iwe unobva wasara uri wega, wakasununguka chose kuenderera nekugadzira, kuongorora magomba kana kunamatira muhondo dzemutambi-maringe-nevatambi, seizvo mafungiro anotora iwe.
Hupfumi hwese mukati mepasi reAlbion hunodzorwa nevatambi - uye izvo zvinosanganisira kuvaka maguta matsva, migwagwa nemigwagwa yekupa. Mari-vatambi vane pfungwa vanogona kushandisa yavo yese nguva vachishanda seyagadziri, mupfuri kana rumwewo rudzi rwevatengesi. Asi kana iwe uchida kuita kurwa zvishoma saka mutambo wakavhurika-wakaperera hunhu system inokutendera iwe kuti uchinje kubva ku wizard kuenda kune murwi kungo simudza tsvimbo yemashiripiti kana pfumo.
Kune matorongo ekuongorora nekukoshesa kuwanikwa, asi iwe unogona zvakare kujoina boka uye kurwira mamwe masangano ekutonga enzvimbo yakakosha kana zviwanikwa. Kune zvakare 'nzvimbo dzegehena' dzekutwasuka mutambi-kurwisa-mutambi kurwa, uye kunyange MOBA -style nhandare uko mapoka evatambi vashanu anogona kubatana uye kushanda pamwechete.
Asi, kusiyana neMMOs mazhinji mazuva ano, Albion Online haina mahara kutamba. Iwe unozofanirwa kutenga Starter pack, inogona kubva pamadhora makumi matatu- $ 30, uye izvo zvinokupa mari yegoridhe kuitira kuti ugone kutenga zvimwe zvekushandisa kuti uende. Iwe unogona zvakare kubhadhara kunyoreswa pamwedzi izvo zvinowedzera hunyanzvi hwako uye humwe hunyanzvi, asi izvo hazvimanikidze, kuti iwe ugone kutamba kwenguva yakareba sezvaunoda kana uchinge wawana yako yekutanga-pack.
Mifananidzo yemutambo haizowane chero mubairo wekupenya kwavo kwe 3D, asi izvi zvinoreva kuti mutambo uchamhanya pamhando dzakasiyana siyana dzeMac. Uye ivo vari kutoronga iOS vhezheni yeiyo iPad nekukurumidza zvakare. Cliff Joseph
Company: Kunyange mitambo
zvinodiwa: Mac OS X 10.10, twese-core Intel Core i5 pro processor, 4GB RAM, 256MB kadhi kadi
Animal Gods anga aine ongororo dzakavhenganiswa zvichitevera kuvhurwa kwayo paStam mwedzi uno, asi izvi zvinogona kunge nekuti vagadziri vemutambo vanotaura nezvayo se'chiito RPG ', iyo inoratidza anokasira-kumhanyisa bakatwa-kusvetuka / kuperetera-gumbo gomba rinokambaira saDiablo.
Pane imwe hondo mu Animal Gods, asi mutambo unondiyeuchidza mamwe mimwe mitambo yeIOS yakafanana Limbo uye Botanicula [zvose zviripowo paMac], sezvo nhoroondo dzisina ruzivo uye kurwisana kwezvinhu zvakanyanya zvikuru kune zvakaitika kune kungoita kuti mhepo yakagadzirwa nemhando yakasiyana yeA2D uye mifananidzo inononoka.
Nyaya yacho ndeyeta-yakatetepa. Iwe unotamba murwi anonzi Thistle - uyo ari sezviri mukadzi, kunyange hazvo hupenyu hwake hwakaipa zvinosuwisa zvikuru kuti agadzire chero hunhu chaihwo hwehunhu. Rukato runotangisa kununura vatatu vanamwari vemhuka vakasungwa mumatanho etemberi, saka unofanirwa kuongorora imwe neimwe tembere uye kukunda vavengi mukati, pamwe nekugadzirisa mamwe mapuzzle munzira.
Kana iwe uri kutsvaga yehack-and-slash chiito mutambo saka iwe unenge uchinyadziswa, sezvo kana iyo yekurwa kana yekugadzirisa-puzzle zvinhu zvemutambo zviri kunyanya kunetsa. Nekudaro, iyo zvinyoronyoro ambient kurira uye kwakasarudzika dhizaini - neumhizha hwunotaridzika kunge senge dzekare dhizaini dhizaini - vane avo mazango
Kuti uve akatendeseka, Mwari vezvipfuwo angangodaro ari kushanda zviri nani pane zvigadzirwa zveIOS zvakachengetedzwa kupfuura pane Mac kana PC, asi zvingave zvakakodzera kuongorora kana iwe uchida mitambo inogona kubatsira kukudzikisa pasi mushure mezuva rinotambudza kubasa. Cliff Joseph
Gedhi reBaldur: Yakavandudzwa Edition
Kwatenga: Mac App Store
zvinodiwa: OS X 10.6 kana kuti gare gare
Gedhi reBaldur raive mutambo wakakurumbira wekutamba mutambo weanopera makore makumi mapfumbamwe, uye ndokumisikidza muyero weRPG yega yega yakatevera. Iyo mifananidzo inogona kunge iri yemusi, uye chimiro chemutambo hachina kunyatso kurongedzwa, asi yakaoma nyaya yenyaya uye eccentric cast yeanotsigira mavara achiri kunakidza uye anogona kupa akawanda maawa anonakidza monster-bashing. Mutambo wakakura, unovhara nzvimbo zhinji dzakakomberedza nzvimbo inozivikanwa seMunondo Coast, uye zvinowanzoita kunge kune vanhu vari kungomira mumutsara munzvimbo yekutandarira kuti vakupe mimwe mibvunzo uye mibairo mukudzosa rubatsiro rwako.
Gedhi raBaldur: Enhanced Edition ndeyechokwadi yegoridhe oldie (pane iPad uyewo paMac). Vechidiki vaduku, vakakwidzwa pamapikisi e3D akadai seGreen Age, vanogona kushamisika kuti chii chiri kukanganisika, asi ani naani anogona kuyeuka mazuva akanaka ekare emitambo yekutamba achafara chaizvo mukana wekuenda kune imwe nyika ku Sword Coast zvakare. Cliff Joseph
Verenga zvakazara Gedhi raBaldur: Enhanced Edition ongororo
Baldur Gedhi II: Yakawedzerwa Edition
zvinodiwa: Mac OS X 10.7, twese-core Intel processor, 4GB RAM, 2.5GB hard disk
Yekutanga Baldur's Gate II yakaburitswa kare kumashure muna 1988 nevanoteedzera vamwari paBioware, uye ayo 2D mifananidzo inozotaridzika kunge yakanaka kune chero munhu akambo tamba ano mitambo yekutamba mitambo senge Bioware's Dragon Age akateedzana. Kunyangwe zvakadaro, iko kutenga kwakakosha kune chero munhu ane kana nekafariro kadikidiki mumitambo yekutamba, uye saizi yakakura yemutambo zvinoreva kuti kukosha kwakanyanya kwemari.
Zvinonyadzisa kuti iyi yakagadziridzwa Enhanced Edition haigone kuunzwa kumusoro kusvika parizvino nemamwe emazuva ano maGrafiki, asi inowana yekushongedza yekushongedza ine yakakwira-def shanduro dzeiyo yekutanga mifananidzo, saka haina kutaridzika yakaipa pane yazvino macomputer skrini. Kunze kwezvo, kungave kuri 3D kana 2D, simba rakakura raBioware rave riine hunyanzvi hwekutaura nyaya, uye Baldur's Gate II iri kunakidza izvozvi sezvaive makore angangoita makumi matatu apfuura. Yakawanda kwazvo tsika yekufungidzira - uine iwe kutora chinzvimbo chemurwi, wizard, hutsinye kana mufundisi - asi zvinoitwa pamwero wakakura chaizvo. Hunhu hwako hunongova mumwe wevana vazhinji vanofa vakaunzwa nemwari akaipa Bhaal, uye mutambo wacho unokusvitsa pahama nehama dzako dzinoverengeka pavanorwira kukunda Bhaal uye votora simba rake se ravo.
Kune mazana nemazana emibvunzo munzira - maawa anosvika mazana matatu anokosha kana iwe ukaedza kuzvipedza zvese - kusanganisira masimba emasimba mukati mebato reShadow Mbavha, uye neepic kurwa neiyo wizard Irenicus, inotambirwa munzvimbo yakazara yekutsvagisa -mamiriro Brit hunhu mutambi David Warner. Kanda mukudzoka kwema bonkers barbar Minsc uye yake hofori nzvimbo-hamster Boo, uye BGII ndeye chaiyo yekudzoreredza kurapwa kweRPG mafeni. Cliff Joseph
Verenga zvinotevera: Maitiro ekuitamba mitambo yekare & kumhanya classic software pane macOS | Ndeipi Mac yakanaka yekutamba?
zvinodiwa: Mac ne OS X v10.9, dual-core Intel processor
Munzira dzakawanda, Dingon Demain is a throwback kumazuva ekutanga emitambo yekutamba. Itsvo-dimensional sideways-scrolling graphics yakave yakaswededzwa, asi zvechokwadi kunoreva retro kana ichienzaniswa nemitambo yakawanda yemazuva ano 3D. Hondo yekutsvaga-yakagadzikana inofadzawo uye haigoni kukunda vafudzi vemamwe maitiro anotsvaga RPGs zvakadai seDiablo series (pasi). Izvozvo, zvisinei, zvine zvishoma zvemazuva ano zvinokanganisa sleeve yayo iyo inofadza ku RPG veterans.
Mutambo uyu unotanga muyakajairika mitambo yekutamba, ichikutumira iwe nemumwe shamwari kuti muongorore kumaruwa akatenderedza imba yemadzitateguru ako. Kune mashoma ekutanga skirmishes anoita semhando yedzidziso - iyo iwe yauchazoda, sezvo paine yakawanda stats yekumwiza iwe paunenge uchikudziridza hunhu hwehunhu hwako - uye zvakare ichikubvumidza iwe kuunganidza dzimwe nhengo kuchikwata chako.
Iwe unobva wasimuka kuti unotsvaga chitaurwa chasviba chataurwa pamusoro apa, icho chinovandira zvisingaite pasi pemurwi wako wekare wemhuri. Hunhu hwese hune hunyanzvi hwayo hwekugona, uye kune mamwe mafaro ehunhu aunogona kuyedza nawo, seanotyisa Denda Chiremba Chiremba uye chimiro chinoshandura chinonyangadza. Uye, pamwe nekutarisana pasi nemhando dzose dzezvikara uye zvisina kufa maghouls, magamba ako anofanirwawo kurarama nemutambo weKushungurudzwa system, iyo inoyera kushushikana kwavo panguva yehondo. Vamwe vatambi vanokwira kuchinetso, asi vamwe vanogona kutendeuka muswe uye kumhanyira kumakomo pachiratidzo chekutanga chematambudziko.
Iyo yakaoma yakaoma, zvakare - hapana Inokurumidza Kuchengetedza sarudzo, saka kana timu yako ikafa unongofanira kudzokera kuguta uye kusaina vamwe vatsva vatorwa. Haasi munhu wese achave nemoyo murefu werudzi urwu rwekunonoka, kufunga, asi kana iwe uri mutambi akaomeswa ipapo Rima Dungeon rinopa chinetso chinogutsa, uye rondedzero yayo Kushungurudzwa system inoita shanduko yakanaka kune clichéd magamba echinyakare basa -kutamba mitambo. Cliff Joseph
zvinodiwa: OS X 10.6.8, 10.7.x kana kuti gare gare; Intel Core 2 Duo; nVidia GeForce 8600M GT kana zviri nani; ATI Radeon HD 2600 kana kuti zviri nani; 2GB RAM; 12GB inowanikwa HD nzvimbo
Makore makumi maviri mushure mezviitiko zvemutambo wekupedzisira, meteor inorova guta rine kunetsekana reTristram, ichivhura gedhi munzvimbo dzakadzika dzepasi uye ichigadzira nzira yekudzoka kwedhimoni ishe Diablo. Semazuva ese, zviri kwauri kuti usunge chiuno chako uye udzorere simba rerima vasati vaburitsa hunhu husinga tsanangurike pasi.
Ino nguva yakakomberedza iwe unogona kusarudza kubva mashanu akasiyana hunhu makirasi - mubharanzi, muvhimi wedhimoni, monki, muroyi uye wizard - yega yega ine yayo yakasarudzika hunyanzvi uye kugona. Iyo mifananidzo yakagadziridzwa futi, uye ikozvino ipa yechokwadi 3D maonero ezviito.
Iko hakuna kuramba kwekupinda muropa uko Diablo III anoshanda, kunyangwe kana Blizzard ingadai yakave yakanyanya kushuvira mukuvandudza kubva kuna Diablo II. Kana iwe uine chero chaunofarira zvachose mumunondo uye uroyi chiito mitambo izvi zvinongova zvisingadzivisike.
Verenga zvakazara Diablo III ye Mac inongororwa
HuMwari: Original Chivi
Zvinotarisirwa: OS X 10.8.5 Mountain Lion kana kuti gare gare; 4GB RAM; Intel HD Graphics 3000 / 4000; 10GB inowanikwa HD nzvimbo
Pane zvinhu zvizhinji zvakanaka zvekutaura pamusoro paMwari: Original Sin. Epic fantasy-RPG: nyika yakafuma yekuongorora, kunyora kunonyadzisa uye nhamba, maitiro akasiyana-siyana emakambaniki, nyaya inofadza uye kurwisana kukuru. Ndezvipi zvakare zvaungada?
Nyika ye Divinity yakaoma kunzwisisa. Zvimwe zvinhu zvose zvinogona kugadziriswa pamwe neimwe nzira, ingava yekunakidza (iwe unogona kupfeka mapapiro pamusoro wako) kana kuita zvinobudirira, zvakadai sekuchera mishonga yekugadzira zvimedu. Munenge chero nhengo ipi neipi yeNPC inogona kuurayiwa, nokudaro kuchinja mapikicha uye kufambira mberi. Zvakawanda zviitiko zvine mhinduro dzakawanda dzinoda kufunga zvakagadzirisa-kuita.
Iyo yekumisidzana-based kurwa inogutsa kwazvo uye inoratidzira kudzika kwaunogona kunge wakamanikidzwa kuwana mune mimwe mitambo. Izvi zvinonyanya kukonzerwa nenzira iyo zvinhu zvinofambidzana nazvo. Kanda chitsinga chekunaya kuti chigadzire madhishi uye izvi zvinokwanisa kushandurwa kuita chando kuti vavengi vatedzemuke kana kuisa magetsi emisungo kuti vabate vavengi. Oiri inononoka, asi zvakare inogona kuiswa pamoto. Kana magamba ako ari kutonhora ivo vari nyore kubatwa nechando uye kana vakanyorova ivo vanotora zvakanyanya kukuvara kubva kune mheni. Moto wakazara une hushamwari uri kuita saka tarisa kuperetera kwako, kunyanya mu co-op modhi.
Kana AI wako kana co-op waunobvumirana naye akasabvumirana pane chimwe chinhu, iwe unotamba mutambo wedombo-mapepa-chigero kuti uone anokunda. Izvi zvinobvumidza vatambi kunze kwemubati kuti vasarudze pane nyaya uye mhedzisiro yekutsvaga. Tarisira kuti upedze nguva yakawanda muDivinity yepasirese, sezvo yega yekutamba-kuburikidza ichizokutorera iwe 50-100 maawa. Jon Carr
Verenga vatinoshanda navo zvizere kubvunzwa kweUMwari: Chekutanga Sin yePC
Verenga zvinotevera: Mhepo Yemafu 3 ye Mac yakabudiswa zuva runyerekupe
Kwatenga: Origin Store
zvinodiwa: Mac OS X 10.6.2, Intel Core 2 Duo, kadhi rakagadzirisa ne 256MB
Kufanana neyakatangira, Dragon Age II yakaiswa mune yekufungidzira nyika yeThedas, asi inounza mutsva mutsva wevatambi uye nhaurwa nyowani segamba rako - rinozivikanwa chete saHawke - rinokwira kubva mukusaziva kuti rive shasha ine simba.
Ikutarisa mune zvematongerwe enyika nekunyengedzera zvinoreva kuti DAII haina chinyorwa chinopikisana-chakaipa-chakaipa chepakutanga, asi zvimwe zvikamu zvemukambi zvinovandudzwa zvechokwadi. Mifananidzo yacho inotonyanya kushamisa, uye kurwisana kunokurumidza uye kwakatsamwirwa, nevanhurume vachikwira vachikomberedza chinyorwa, vachikanda mapakatwa avo uye kupisa kwose kwose munzvimbo yacho. Iko kunewo mapato maviri ekuwedzera ayo unogona kutora anenge ane £ 6 mumwe nomumwe.
Zvirongwa zveSystem: Mac ne OS X v10.7.5, 2.0GHz Intel Core i5 pro processor, Intel HD Graphics 3000, nVidia GeForce GT 650M
Iyi shanduro yeIndaneti yeClassic Dungeons uye Dragons yemutambo yave iripo kwemakore gumi ose ikozvino, uye yakave nokuchinja kwakawanda, kusanganisira kusinzvenga kusingagoni kusununguka-kutamba. Pane imwe nzira munzira yeM Mac version yakaonekwa neine fanfare shoma, uye ichangobva kutora ziso redu kuStam. Verenga zvinotevera: Best free web browser games for Mac
Iwo maDungeons ekutanga nemaDragons akatsanangura yazvino fantasy dhizaini-yekutamba mhando, kunyangwe - asi zvine mutsindo - zera reiyo shamwari yepamhepo zvinoreva kuti izvozvi zvinotaridzika kunge zvisiri zvechivambo kana zvichienzaniswa nemamwe maMMOs azvino uno akaonekwa mumakore apfuura. Iwe unotanga nekusarudza yako yaunofarira dhizaini yekutamba - murwi, spellcaster kana hutsinye - uye mutambo unobva wakuratidzira yakateedzana yesarudzo dzekirasi dzinokodzera iwe. Ipapo iwe unosvetukira mumutambo uye nekukurumidza unozviwana wagezwa pachitsuwa mushure medutu pagungwa, nechitsuwa ichi chichiita senzvimbo yekutanga dzidziso yekuunza vatsva kuti vakurumidze. Paunenge uchinge wawana zororo rezvakakosha iwe unonanga kuenda kuguta reStormreach, uko kune pevhu uye quests galore.
Kunyangwe zera rayo, mutambo une zvimwe zvinonakidza kumonyoroka kwawo. Panzvimbo pekugara uchitanga padanho rekutanga, iwe une mukana wekugadzira 'iconic' hunhu uyo ​​anotova nezviitiko zvishoma zvezviitiko pasi pebhandi ravo - tisingataure bhandi rakadzikama, zvombo nezvombo, kuti iwe ugone kusvetuka wakananga mugomba -kutsvaira chiito pasina kutambisa nguva kuuraya madandemutande nemamwe mabasa epasi-soro.
Mutambo uyu unoisawo huzhinji hwekukoshesa pachiitiko cheboka, saka kana iwe uri wega mhumhi mhando yemutambi anofarira kuenda ega apo uchiongorora World Of Warcraft kana Elder Mipumburu Online ipapo iwe unogona kuwana Dungeons Uye Dragons Online zvishoma zvinorambidza. Nekudaro, rinoita basa rakanaka rekudzosera rakanakira 'bhendi rehama' kunzwa kweiyo yekutanga D&D, uye inogona kuve yakanaka (uye isingadhuri) sumo yeMMO mutambo wevatsva. Cliff Joseph
Elder Mipumburu Online
Zvirongwa zveSystem: Mac OS X 10.7, Intel i5 pro processor neNVidia GT 650M kana Radeon HD 5770 mifananidzo, 80GB hard disk
Hapana mimwe yemitambo yekare, yemutambo mumwe chete muVakuru Mipumburu yakatevedzana yakambosunungurwa kuMac, saka takashamiswa zvikuru apo vazhinji vevanhu vakawandisa vemu Elder Scrolls Online panguva imwe chete yakatangwa paMac na PC muna April 2014.
Munzira dzakawanda, Elder Mipumburu Online - ESO kushamwari dzayo - mutambo wekupokana-uye-uroyi, ine nyaya yenyaya pamusoro pemuchinda wedhimoni Molag Bal ari kuyedza kurwisa nyika yekufungidzira yaTamriel. Asi izvo zvinongova zvinhu zvemashure uye, sevazhinji vakawanda RPGs, ESO zvese ndezvekupedzisa mibvunzo, kuuraya zvikara uye kazhinji kusimudzira zvakapambwa zvakanyanya sezvaunogona.
Kufanana neWorld Warcraft uye vamwe ve RPG, ESO inokutendera kuti uite semhare, wizard kana nharo, asi iwe unogonawo kubatanidza chimwe chezvikamu zvitatu zvinorwisana zvinonzi Daggerfall Covenant, Ebonheart Pact uye Aldmeri Dominion. Kurwisana kwemasimba pakati pemapoka matatu aya kunowedzera chinhu chinonakidza chechigamba-kurwisana--mutambo wepamberi kuenda kune chimiro chepamusoro mibvunzo nemabasa, uye mutambo unoita basa rakanaka rekusika mhepo yenyika muhondo.
Kutanga kwemutambo kwakashungurudzwa neboka rezvikwata, asi mutambo wave negore rekugadzirisa iye zvino, uye ESO zvakare ichangodonhedzera kubhadhara mari yazvo yega yega yega (kunyange kune imwe yega yevamiririri vhudhi yevamiriri vevanyori vakazvitsaurira) . Izvi zvinoreva kuti iwe unongoda kutenga kopi yemutambo uye iwe unokwanisa kutamba iwe chero bedzi iwe uchida usina kubhadhara.
Mukuru Mipumburu Online: Tamriel Unlimited
zvinodiwa: Mac ne OS X v10.9, Intel Core i5 pro processor, discrete graphics kadi ne 1GB VRAM
Iyo-yega-mitambo yemitambo muvakuru maPumburu akateedzana haisati yambowanikwa paMac, saka zvakave kushamisika kunofadza apo vakawanda vakawanda vatambi Vakuru Mipumburu Online (ESO) vakaonekwa paMac kumashure muna 2014. Nehurombo, mutambo wacho wanga usiri chaizvo kurova kwakatiza, uye ESO yakamanikidzwa kubvisa mari yayo yekunyorera muna 2015. Iyo Mac vhezheni yaivewo nematambudziko ehunyanzvi uye vashandisi vazhinji veMac vakashuma matambudziko vachingoedza kuisa mutambo (kusanganisira ini, pandakatenga iMac nyowani gore rapfuura) .
Nekudaro, ESO yakapihwa yechipiri yekurendesa yehupenyu neiyo huru revamp inonzi Tamriel Unlimited. Zvakare nekuwanikwa kurodha pasi kubva kuSteam - uye ikozvino uchishanda zvakaringana paMac yangu - Tamriel Unlimited inounza huwandu hweshanduko huru kune yekutanga ESO. Kune akawanda matsva matsva ekuongorora, uye ikozvino zvave nyore kuwana vamwe vatambi veboka kuti ugone kuongorora nekugadzirisa yakawanda yemibvunzo mikuru nematambudziko. Neimwe nzira, iwe unogona kuyedza iyo nyowani dueling sisitimu yenzvimbo yeumwe-ne-mumwe kurwa nevamwe vatambi.
Nekudaro, iyo yakakosha ficha yeiyo yakagadziridzwa ESO ndeye 'level-kuyera' iyo inogonesa mavara ako kuti agadzirise otomatiki danho ravo sezvavanopinda munzvimbo dzakasiyana. Izvi zvinoreva kuti kunyangwe vatsva vane vatambi vepazasi vanogona kuongorora matorongo nedzimwe nzvimbo dzaimbove dzisingabvumirwe. Vanhu vazhinji vanopokana kuti izvi zvinobvisa chinetso chekukwiridzira mavara ako uye kudzidza kushandisa hunyanzvi hwako nemazvo, asi kuchine mibvunzo yakawanda uye mhomho dzevakuru dzinokupa nguva yakaoma. Uye, sekune maMMORPG mazhinji, kunakidzwa chaiko muESO kunouya kubva mukujoinha mapoka nemapoka kuitira kuti iwe ugone kushanda nevamwe vatambi kugadzirisa makuru 'epasi maboss' ndiwo matambudziko akanyanya emutambo. Cliff Joseph
Kwatenga: Final Fantasy XIV
zvinodiwa: iMac kubva kunono-2013 kana pamusoro, ne OS X v10.10, discrete makadhi kadi ne 512MB VRAM kana Intel Iris Pro
Price: £ 40 yekutanga 30 mazuva, ipapo £ 8.99 kubhadhara kwemwedzi
Yekupedzisira Kufungidzira XIV yakave nenhoroondo inonetsa pamapuratifomu ese - asi kunyanya paMac. Muchokwadi, iyo Mac vhezheni yemutambo iyo yakaburitswa muna 2015 yakabviswa uye ivo vanogadzira vakatora nhanho isingaenzaniswi yekupa chaiko kudzoreredza kune vashandisi veMac. Kunyangwe izvozvi, iyo yepamusoro sisitimu inodikanwa yeiyi yakagadziridzwa Mac vhezheni, tisingataure zvinoshungurudza kunyoresa kunyoresa uye yekumisikidza maitiro, uye kunyoreswa kwemwedzi wega kumusoro, zvinoreva Final Fantasy XIV hausi mutambo wevasina kujaira vatambi.
Iko kune, zvisinei, mutambo wakanaka kwazvo wakamirira anowedzera mwaka MMO fan. Iyo yekufungidzira nyika yeEorzea yakaparadzwa nehondo inotyisa, inozivikanwa seNhamo, saka iwe unopinda mumutambo seanodakadza mukana uye unodzidza izvo zvekutanga nekuita mabasa uye mibvunzo iyo inobatsira vanhu veEorzea kuvaka zvakare nharaunda yavo. Sezvo iwe uchiwana ruzivo uye simba iwe unogona kugadzirisa mimwe mibvunzo inorema uye kubatana pamwe nevamwe vatambi mu 'zviitiko zvinoshingaira' zvinoitika zvega munzvimbo dzakasiyana mumutambo wese.
Yakajairika mitambo yekutamba, asi iyo kirasi system muFFXIV inoshanda zvakanyanya, ichikubvumidza iwe kubva pa wizard kuenda kune murwi nekungodonhedza rako remashiripiti uye kunhonga pfumo panzvimbo - kunyangwe iwe uchiri kuda kushandisa imwe nguva kudzidzisa yako ese maviri melee uye mashiripiti hunyanzvi kuti uzvishandise nemazvo.
Iyo Mac version ndiyo inotengesa, asi inosanganisira Heavensward kuwedzera pakiti iyo inowedzera nzvimbo itsva mitsva nemapuranga aunogona kuongorora, pamwe nepamusoro pezinga rekodhi, uye kunyange kukwanisa kubhururuka zvakasiyana-siyana pamhando dzakasiyana-siyana dzezvitsva. Cliff Joseph
zvinodiwa: Mac OS X 10.7, Intel i5 pro processor neNVidia GT 320M kana Radeon HD 6630 mifananidzo, 25GB hard disk
Price: Yemahara (Moyo weminzwa kuwedzera - ona pazasi - inodhura £ 34.99)
Guild Wars 2 yakatanga kuburitswa paPC chete uye iyo Mac vhezheni yakaonekwa chinguva chidiki gare gare ine fanfare shoma, zvinoreva kuti GW2 haina kukwezva avo vazhinji maMac vatambi kusvika parizvino. Iko kunonakidza kwakawanda, hazvo, uye iyo Guild Wars mitambo yagara iri yekunyoresa-yemahara, saka GW2 inzira yakanaka yekutora yepamhepo-kutamba-kutamba chiito pasina kubhadhara muripo wemwedzi.
Iko, inobvumirana, nguva yakawanda yekufungidzira mafungiro, nevane simba, varoyi, uye vanokakavara, uye nemibvunzo yakawanda, mhuka nemapuranga. Zvisinei, GW2 inowana zvinhu zvose zvakakosha zvakarurama, kusanganisira unyanzvi hunodiwa hunoita kuti uwane masimba akasiyana uye unyanzvi zvichienderana nezviri zvombo zvaunosarudza. Iwe unogona kutakura zvigaro zvezvombo zvakasiyana newe uye unoshandura pakati pavo zvichienderana nezvombo zvipi zvingaita zvakakosha kuti basa riripo.
Nyaya yenyaya inotarisa mutambo inobva yakanganwa fantasy fare, asi mwoyo chaiyo weGW2 ndiye mutambi-anokwikwidza-mutambi. Ndinopedza nguva yakawanda yenguva yangu mumasnas maduku, apo mapoka maviri evatambi vanorwisana naro kuti ave nekutonga kwezvimwe zviratidzo uye zvinangwa. Zvisinei, kunewo matambudziko makuru eHorld-Versus-World umo mauto matatu evatambi vanorwa hondo munzvimbo huru dzehondo, uye mukurwisana kwemazuva akawanda panguva.
Iko kune zvakare yekuwedzera pasuru munzira yayo, inonzi Moyo Yeminzwa, inozounza hutsva hunhu kirasi uye hunyanzvi hunyanzvi - kusanganisira hang-gliding! - pamwe chete new player-versus-player modhiyo mauri kuyedza kudzivirira Ishe wenhare yako kubva kumuvengi ari kukomba dziviriro dzako.
Guild Wars 2: Moyo Weminzwa
zvinodiwa: Mac ne OS X v10.8, Intel Core i5 processor, discrete graphics kadi ne 256MB VRAM
Yekutanga Guild Wars 2 yave ichiwanikwa paMac kwenguva yakati rebei, asi isu taifanirwa kumirira rinenge gore kuti Moyo WeMinzwa uwedzere kusvika kuMac futi. Pamutemo, Moyo Weminzwa unonzi wepasuru yekuwedzera, asi - senge ichangoburwa Tamiri yekuvandudza yeVakuru Mipumburu Online - uyu mutambo wepamhepo-wekutamba mutambo ikozvino unowana kumeso kukuru kunoshandura hunhu hwemutambo wekutanga.
Iyo yakajairwa vhezheni yeGuild Wars 2 ikozvino yakasununguka kurodha pasi nekutamba, kunyangwe iine isingadzivisike mu-mutambo chitoro icho chinokuyedza iwe kukosora imwe mari yezvakasiyana-siyana zvekutamba mitambo. Asi kana iwe uchida kunakidzwa nezvose zvinopihwa nemutambo saka uchafanira kubhadhara £ 34.99 yeMoyo Yeminzwa. Kamwe yaiswa, Minzwa inosimudza kapu yeyero yevatambi vako, pamwe nekuunza kirasi nyowani inonzi Chibvumirano, uye hunyanzvi 'hwatenzi' hwaunogona kushandisa muhondo, kana kunyangwe kudzidza kurembera-kutenderera nemamwe emitambo inobhururuka yemakomo. . Kune zvakare nzvimbo nyowani yesango, inonzi Maguuma, iyo ine akawanda matsva emhando yepamusoro-soro uye nehondo dzevakuru kuti ugare wakabatikana.
Mutambo uyu unodhura zvishoma, uchifunga kuti iyo yekutanga GW2 yave nemakore akati wandei, asi haidi mari yemubhadharo yemwedzi nemwedzi, uye kukosheswa pane mutambi-achipesana-nemutambi chiito mukuvandudzwa kwazvino zvinoreva kuti iwe unogona kutamba online ne - kana kupokana - shamwari dzako nariini uye nezuva. Zera remutambo wepakati zvakare zvinoreva kuti rinofanira kumhanya mushe kumaMacs achangopfuura, futi. Chinhu chega chekucherechedza ndechekuti, zviri pamutemo, iyi Mac vhezheni ichiri 'beta' - kunyangwe yanga iri mubeta kubvira munenge muna 2014, uye haina kumbobvira yakonzera chero matambudziko mumaawa mazhinji ekutamba muhofisi yedu iMac. Cliff Joseph
zvinodiwa: Mac ne OS X v10.9, 2.0GHz dual-core Intel processor, nVidia GeForce 320M, Radeon HD 2400 kana Intel HD 3000 kana kuti gare gare
Blizzard inoita kunge ine yekutengesa kadhi mutambo (TCG) chiitiko chakasonanidzwa, nemamirioni avanhu vanogara vachitamba Hearthstone. Asi kana iwe uchifarira kuyedza kadhi mutambo uyo unopa chimwe chinhu chakasiyana saka zvakakodzera kutarisa Hex.
Iyo zvakare sarudzo yakanaka kune vanhu vatsva kumitambo yemakadhi, sezvo Hex inopa yakadzama dzidziso inounza mabhesiki emutambo, kusanganisira makadhi ehondo anopa akasiyana hunyanzvi nemasimba, uye makadhi ekushandisa anogona kusimudzira masimba ako nenzira dzakasiyana .
Iwe unotanga nokusarudza mhare, kubva pane zvinowanzovhiringidzika dzemadzinza anofadza uye makirasi, akadai sevanhu, Orcs, uye Elves, Warlocks, Clerics uye Rogues. Mhare imwe neimwe ine mano avo uye maitiro ekutamba, saka sarudzo yenyu pano ichasarudza rudzi rwekadhi dzamunoda kuunganidza apo iwe unofambira mberi mumutambo. Kufanana nemitambo yemakadhi akawanda, Hex akasununguka kutamba, asi anoita mari yako kukutengesa mamwe mapepa emakadhi, ane nheyo yekutanga inotenga £ 10.99, uye yePalmal Dawn pack yakabudiswa kwevhiki yapfuura ichiwedzera imwe £ 9.99.
Neraki, iwe unogona kutanga pasina kushandisa chero mari zvachose. Vagadziri vacho vanotsanangura Hex seyekutanga 'MMOTCG', sezvo ichiwedzera zvinhu zvevazhinji-vatambi vepamhepo mhando kune kadhi yekutengesa fomati. Zvakare nekutamba uchipesana nevamwe vanhu online, iwe unogona kupinda mumutambo wenyaya-yakavakirwa mushandirapamwe, iyo inobvumidza iwe kuti uongorore huwandu hwemajeri kuti uwane goridhe uye mimwe mibairo. Isu tinoda zano rekuyedza kutamba wega online, sezvo ichiwedzera chakasiyana chimiro cheyakajairwa kadhi mutambo fomati, uye ichikupa iwe mukana wekuona kuti ungasvika papi pasina kubvarura makadhi echikwereti. Cliff Joseph
Zvirongwa zveSystem: Mac ne OS X v10.8, 2.0GHz Intel Core i5 processor, Intel HD 4000, kana GPU iri pachena ne 512MB VRAM
Marvel Heroes anga aripo kubva 2014 - aine Mac vhezheni yakatanga kuoneka muna2015 - uye yakagara iine akateedzana ezvinyorwa kubvira ipapo, kazhinji ichitarisa kune vanhu vakaita saDoctor Strange kana Kapiteni America avo vane mafirimu makuru akaburitswa nguva pfupi yadarika. Nekudaro, iyi 2.0 yekudzoserwa yakaunzwa muna Ndira inopa iwo mutambo wese kugadzirisa kukuru.
Chinhu chinoitwa naMarvel Heroes ndiyo nzira iyo inobata nayo manzwiro eakasiyana masimba ehunhu hwese, uye iyo 2.0 yekuvandudza zvakanyanya inotarisa mukugadzirisa masimba masimba kuitira kuti usazoda minwe gumi paruoko rumwe nerumwe kuti ushandise zvese zvako masimba nezvombo. Iyo nyowani inotsvedza inotsvedza inokutendera iwe kugadzirisa chinetso cheyero yenzvimbo imwe neimwe paunopinda mairi, zvichiita kuti zvive nyore kune vatambi vatsva vasina dura rezvipenga zvepamusoro uye nhumbi dzekushandisa mukurwa. Kune rimwe divi remitambo, kune itsva sisitimu yeInfinity Powers - yakavakirwa paInfinity Stones mumafirimu eMarvel - iyo inobvumidza vatambi venguva refu kuti varambe vachivandudza magamba avo epamusoro.
Zvinotyisa kutyisidzira kuyedza neakasiyana mavara nemasimba, asi mutambo une zvayakaipirawo. Ichiri chemahara-kutamba, asi iwe unongowana chete hunhu hwaunogona kutamba kwese kusvika padanho reZinga 60. Unogona kuyedza nevamwe kusvika padanho regumi, asi kuvatora kupfuura iro danho zvinoreva kuti unofanira pedza maawa uchitora yakasarudzika Eternity Shards mumutambo, kana kukosora £ 10 kusvika £ 7 yehunhu hwese.
Uye nyika yeMarvel Heroes haina nzvimbo yakakura seyoyo yevadzidzi vaMO vakadai seWorld Herocraft. Inosanganisira nhamba shoma yezvikamu zvekuti iwe uongorore, uye mazhinji emibvunzo yacho inogona kunzwa seisina kufanirwa uye ichidzokorora. Asi kunyange zvazvo zvingave zvisina nguva yakareba yekudzora mhando yeWowW kana yeGuild Wars mitambo, Marvel Heroes inogona kunge iri kukurumidza kufara kana iwe uchingofungidzira kukurumidza kukurumidza kwechigamba-chiito chiito nguva nenguva. Cliff Joseph
Overlord: Kurera Hell
kambani: Virtual Programming
zvinodiwa: Mac ne OS X v10.9, 2.0GHz dual-core Intel processor
mutengo: £ 6.99
Yekutanga Overlord yakaburitswa iyo PC, Xbox uye Playstation nzira kumashure muna 2007, asi ichangobva kuoneka paMac kekutanga. Uye inomira mushe mushe zvemutambo ungangoita makore gumi ikozvino.
Overlord inorondedzerwa sechiito chekuita-kutamba mitambo, pamwe nemitsara yeDheablo series. Iwe unotora chikamu cheAlllord, murume akaipa anoisa kunze kuti adzorere nyika dzake kubva kune boka revamwe vanhu vakaipa. The Overlord inoshandisa demo uye inogona kudzidza unyanzvi humwe chete sezvaunofambira mberi mumutambo, asi simba rake guru ndiko kukwanisa kudana mazana evanhu vanoita goblin-sevane minon kuti vaite zvaanoda. Iwe unogona kutumira madhimoni ako kuti aparadze muvengi kana kutora zvinhu zvaunoda kutakura zvakapoteredza.
Sezvaunowedzera simba iwe unogona kudana nhamba yakawanda yevashandi, uye kunewo marudzi akasiyana emadhononi aripo, kusanganisira varwi, vapfuri vemapfuri uye vanoporesa, saka izvi zvinowedzera chimwe chinhu chechirongwa kumutambo sezvaunodzidza nzira yekuendesa vana vako kumarudzi akasiyana marudzi evengi. Uye chinhu chinonakidza chemutambo chiri muhutano hwako hwekuita sehuipi sezvinobvira, kutyisa vagari vomunharaunda vasina mhosva kana pane dzimwe nguva kuratidzira ngoni uye kuvabvisa kubva pachigamba.
Iyo Raising Hell yekuwedzera paketi inosanganisirwa neye Mac vhezheni zvakare inosanganisira akati wandei matsva 'gomba rakadzika' rinopa chinetso chakasimba chaizvo. Nehurombo, iyo Mac vhezheni haina yepamhepo multiplayer modhi, asi pane iyo split-screen mode iyo inobvumidza vanhu vaviri kutamba pamwe chete, kungave kushanda pamwe chete kupedzisa dambudziko, kana kukwikwidzana vachipesana kuti vaparadze chakanangwa. Cliff Joseph
Chaizvoizvo - iwe unomirira makore kune Overlord mutambo paMac, uye ipapo vatatu vanouya vese kamwechete. Kupisa pazvitsitsinho zveOverlord yazvino uye kuwedzera kwayo kweGehena Hell isu tave neOverlord II.
Maumbirwo eiyi sequel akafanana chaizvo neiyo yekutanga Overlord, kunyangwe iri padanho rakatokura. Iwe unotamba seyakaipa Overlord uchitsvaga kuti uwanezve simba kubva kuKubwinya Humambo, iyo yakatora kutonga kwenyika dzako. Izvi zvinokupa iwe kunyange akakurisa mauto nenzvimbo hombe kuti ukunde, uye iwe ikozvino wabatsirwa nemhando ina dzakasiyana dzemamoni dzaunogona kushandisa kuita yako yese yakasviba basa. Iwo ma brown marion emabhonzo anomhanyisa akananga kuhondo, nepo iwo matsvuku madhivhoni achikwanisa kucheka fireballs ari chinhambwe. Kune zvekare kune vakaba vegreen minions vanoita semhondi dzakavanzika, nepo vebhuruu maminoni vanogona kumutsa shamwari dzavo dzakadonha uye kushambira kuti vaongorore nzvimbo idzo mamwe maminoni asingakwanise kusvika. Vateveri vako zvakare vane kugona kukwira mhuka dzakadai semhumhi uye madandemutande, izvo zvinovapa mamwe masimba aunogona kushandisa mukurwisa.
Iyi sequel zvakare inosvitsa maviri akasiyana mutambo modes. Mune Ekuparadza modhi iwe unongoparadza zvese zviri munzira yako, uchishandisa simba rehupenyu revaya vawirwa navo kuita ako ekuparadza zvinyorwo zvakanyanya kuuraya. Neimwe nzira, iwe unogona kuisa muuranda vavengi vako wovaita kuti vakushandire iwe, uchivakanda muhondo sechigoni-furu kana kuvashandisa kugadzira zviwanikwa zvinowedzera simba rako. Zvese zvakanaka kunakidzwa kwakachena, uye kwete kudhura zvakanyanya paUS $ 6.99 chete, uye zera remutambo zvinoreva kuti rinomhanya chaizvo kunyangwe pamhando dzekare dzeMacs. Iko chete kuora moyo ndekwekuti - nekuda kwezvikonzero zvakasiyana zvehunyanzvi - sarudzo dzevadzidzi vakawanda kubva kuPC yekutanga vhezheni haishande paMac. Cliff Joseph
Kwatenga: chiutsi | Mac App Store
zvinodiwa: Mac ne OS X v10.6.3, 2.5GHz Intel Core i5 processor, Radeon 6750M kana GeForce 330M kana kupfuura
Price: £ 34.99 (pane Steam), £ 25.49 (paMac App Store)
Tinobvuma kuti takasuwa Mac Mac yePillars Of Eternity apo yakatanga kusunungurwa gore rapera, asi mutambo wakanga uchangobva kuongororwa ne maviri makuru ekuwedzera mapaketi saka izvi zvinoratidzika kunge nguva yakanaka yekudzoka uye kudzokorora nyaya dzose.
Kutarisa kumwe kwembiru dzekusingaperi kunoita kuti zvive pachena kuti mutambo uyu wakanyanya kuteedzerwa pamitambo yekutamba yakadai seBaldur's Gate uye Icewind Dale. Iyo isometric mifananidzo yakafanana chaizvo, pasi chaipo kune 'mhute yehondo' iyo inovhara nzvimbo yauri kuongorora, uye madiki madenderedzwa egirini anosimbisa mavara pavanenge vachifamba. Iyo michina yemutambo yakafanana futi, neyakajairwa assortment yevanhu, elves uye mamwe marudzi, uye kugona kudzidzira semurwi, wizard kana hutsinye. Iyo ine mashoma mazano ayo ayo, hazvo, kusanganisira makirasi senge iwo psychic maCipher, kana iyo Chanter, inova iri mhando yesopu-up yehondo bard ine nziyo dzinogona kumutsa vakafa kana kushevedza mafiromendi.
Iwe unotanga muMbiru Dzokusingaperi semunhu anozvininipisa mufambi, anouya achiyambuka dhorobha reDyrwood obva aona kuti yakatambudzwa nekutukwa. Pasina mubvunzo kutaura, iwe wakasimuka kusimudza kutuka uku, kuunganidza shamwari nyowani uye kupedzisa matura emipendero-mibvunzo munzira. Izvo zvinofanirwa kukuchengetedza iwe wakabatikana kwemaawa makumi matatu kusvika makumi mana, uye kana uchinakidzwa nemutambo unogona kutenga mapakeji maviri ekuwedzera - White Kurume Chikamu I uye II - iyo inowedzera nzvimbo nyowani kumutambo mukuru, uye chishuwo chitsva chekuwanazve yekare nyanzvi yekugadzira.
Izvo zvinyorwa zvemashoko, zvinyorwa, uye mamwe mavara emifananidzo zvingasafadzi kune vatevedzeri vemamwe maitiro anotsvaga RPGs, zvakadai seDablo kana Dragon Age mimwe mitambo, asi nhoroondo yekare-yechikoro yeMipiru Yekusingaperi inoita kuti ive-ine musoro we vateki vemakwikwi ekudaidza mitambo. Cliff Joseph
Nyota Wars: Knights Of The Old Republic
zvinodiwa: Mac OS X 10.5; 1.8GHz Intel processor; kadhi yemifananidzo ine 128MB VRAM
Pakutanga yakatangwa mu2003, KOTOR yakadzoka shure sezvo Apple yatanga Mac Mac Store, uye iye zvino ndiyo imwe yepamusoro ye10 yepamusoro-yakakura mitambo.
Chiito chinogadzirirwa makore 4,000 pamberi peSvondo Wars mafirimu, panguva apo Jedi iri kusvirwa pasi nemauto eSith. Iwe unotamba mumwe wekupedzisira weJedi Knights, uchitungamira hondo yevasununguko varwi pamusana pekuenderera kumapuraneti akadai seTatooine uye Sith musha wenyika ye Korriban. Zvisarudzo zvako zvinosvika pamigumisiro yemutambo, nekusarudza kana iwe uchengetedze garaxy kana kuwira kune rumwe rutivi rweMasimba.
Nyeredzi dzehondo: Knights dzeAkare Republic II
zvinodiwa: Mac OS X 10.9.5, 2.2GHz dual-core Intel processor, 4GB RAM, 256MB kadhi kadi
mutengo: £ 9.99
Zvinopfuura makore gumi kubvira iyo yekutanga Knights Yeiyo Yekare Riphabliki yakatanga kuburitswa, asi mutambo uyu uchiri kutengesa zvakanaka paApp Store kunyangwe mushure memakore ese aya. Saka zvakauya sekushamisika patakaona kuti iyi sequel - yakatanga kuburitswa PC kumashure muna 2005 - yangosvika paMac kekutanga.
Kufanana neyakafanotangira, KOTOR II yakaiswa zviuru zvemakore munguva yakapfuura, nguva refu zvisati zvaitika zviitiko zveNy Star Wars mafirimu emitambo. Iwe unotamba mumwe wekupedzisira Jedi aripo, uyo ave achitsakatiswa zvachose shure kwehondo yakareba nevakaipa Sith Lords. Pakutanga kwemutambo iwe unomuka wakakuvadzwa uye usingakanganwi zviitiko zvezvino. Kunyangwe chiedza chako chechiedza-saber chashaikwa, saka dambudziko rako rekutanga nderokudzorera pfungwa dzako nemasimba ako eJedi, ndokubva waenda kuti uedze uye uwane chero imwe Jedi iyo inogona kunge yakapona.
Kune hunyanzvi hwakawanda hwehunyanzvi uye kugona kwaunogona kukudziridza iwe paunofambira mberi kuburikidza nemutambo, uye iwe unogona kutarisa pane angareruka-saber kurwa kana kunokanganisa Masimba Masimba zvichienderana nekuti iwe unoda kukudziridza hunhu hwako. Iko zvakare kune yakasimba nyaya uye yekutamba-yekutamba chinhu, izere nezvematongerwo enyika kumonyoroka uye kutendeuka, uye tsika sarudzo dzinozokanganisa yekupedzisira mhedzisiro yemutambo. Iyo 3D mifananidzo inotaridzika kunge diki diki izvozvi, asi iyo inonakidza nyaya yenyaya uye yakajeka-saber chiito ichakurumidza iwe kuti iwe ubate, uye paingova chete £ 9.99 mutambo wacho chaicho chibvumirano chevateveri veStar Wars.
zvinodiwa: Mac ne OS X v10.5, 2.4GHz dual-core Intel processor, discrete graphics kadi ne 256MB VRAM
mutengo: £ 10.99
Izvo hazvina kunyatso tsanangudza kutsanangura Dutu semhepo-inoyerera vhezheni yeNo Man's Sky, sezvo iyi nautical-kutamba-kutamba / zano mutambo unongokutendera iwe kuyambuka makungwa epasi rimwe chete, panzvimbo pemaguru asingagumi ekunze kwenzvimbo. Nekudaro, iyo yakavhurika-yekutamba mitambo yekupeperesa kweTempest ine fanano neNo Man's Sky, sezvo iyo inobvumidza iwe kuongorora nyika yakavhurika - kana yakavhurika gungwa - kwaunosununguka kufamba-famba paunoda, uchirwira vapambi uye imwe nguva chikara kubva mvura dzakadzika, kana kungo tarisa pane zvekutengesa kuitira kuti uwedzere hupfumi hwako.
Iwe unotanga nekugara nhaka chikepe chababa vako, iyo Henrietta, uye ipfupi - uye pano neapo inovhiringidza - dzidziso inokutungamira iwe kuburikidza nekutanga kwekufamba uye kurwisa pagungwa. Mushure meizvozvo iwe unogona kupinda mune yakakosha Mepu kuona uye chati yako kosi, pamwe uchivavarira padyo yekutengesa chiteshi, kana kuenda kugungwa uchitsvaga ruzivo.
Sezvo iwe padhuze nekwauri kuenda, kana kana ukasvikirwa nechikepe chevavengi, iwe unoshandura muye 3D maonero, ayo anoratidza chikepe chako chiri kurima nemumakungwa akavhurika. Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge tajaira. .
SaNo Man's Sky uyu mutambo iwe waunogona kutamba zvakanyanya uri wega, kutengesa kana kurwa kuti uvandudze yako wega maitiro ekutamba, asi kune zvekare nzira yevazhinji apo iwe unogona kubatana pamwe neshamwari kupedzisa quests, kana kungopurana. kumusoro muhondo dzisingaperi mugungwa.
Kutambudzwa: Tides Of Numenera
Kwatenga: chiutsi or Mac App Store
zvinodiwa: Mac ne OS X v10.8, Intel i5 pro processor, GeForce GT 700M kana pamusoro
Price: £ 34.99 (Steam) kana £ 43.99 (Mac App Store)
Dzimwe nguva, sekutaura kunoita chirevo, rwendo rwacho rwakakosha kupfuura kwaunoenda. Ndozvazviri chaizvo nezve Kutambudzwa: Tides Of Numenera, mutambo uyo - kunyangwe isiri yakateedzana - unobva kune vamwe vakafanana timu dhizaini iyo yakagadzira mutambo wekare-wekutamba mutambo Planescape: Kutambudzwa angangoita makore makumi maviri apfuura.
Gadza pfungwa-inokatyamadza bhiriyoni rimwe ramakore mune ramangwana (ipa kana kutora mavhiki mashoma), Kurwadziswa kunoitika munyika isinganzwisisike apo munhu anozivikanwa saAnochinja Mwari achirova kubva mumuviri kuenda kumuviri kuti awane hupenyu husingaperi - zvakada kuita Apocalypse mune yekupedzisira X-Men firimu, asi yakawanda inonakidza. Iwe unotamba 'castoff': muridzi wemuviri wakamboshandiswa izvozvi waraswa neari Kuchinja Mwari, uye ndiani zvino aona kuti yekare spook inonzi Shungu iri kuvhima pasi ese castoffs nekuaparadza.
Idzo inhau dzakaipa, chokwadika, saka iwe unosimuka pakutsvaga kuponesa hupenyu hwako, uyezve kuti uwane zvimwe nezve ramangwana renyika yeNombolo uye nebasa rako munyika iyoyo. Uye, hongu, iwe unosvika pakusarudza kirasi yehunhu hwako, senge Glaive murwi kirasi, akaomarara-saJacks (ezvese zvivakwa), uye maNanos, vanoshandisa nano-tekinoroji iri kumberi zvakanyanya zvakanyanya zvakapetwa kumusoro semashiripiti.
Kufanana Planescape, Kutambudzwa kunoisa kusimbiswa kwenyaya-kutaurira panzvimbo yekurwisana, nekutengesa kwenguva refu kwekukurukurirana, uye zvisarudzo zvinokosha zvinoita kuti vamwe vateereri vateerere, uye kuti mutambo wacho pachawo unobudirira sei. Uye, chokwadi kumidzi yaro, maikirwo acho anogadzirisa 2D uye isometric.
Kana iwe uri fan of 3D chiito-RPGs saDiablo saka iwe ungangodaro unotarisa kumwe kunhu - uye ichangoburwa 2.5 chigamba cheDiablo 3 inova inonakidza chaizvo - asi kana iwe uchida maRPG anotarisa mukutaura nyaya-uye kuvandudza hunhu. iwe unowana iyo inoshamisa uye inoshamisa nyika yeTambudzo kuve akakodzera mutsivi kune iyo yekutanga Planescape. Cliff Joseph
Nyika mbiri II
Kwatenga: Mac App Store (gwaro rakazara); Mac App Store (GotY edition)
zvinodiwa: Mac OS X 10.6.3, 2GHz Intel processor, graphics card ne 512MB VRAM
Price: £ 7.99 (yakawanda edition ye Mac App Store), £ 10.99 (Game of the Year edition pa Mac App Store), £ 14.99 (pane Steam)
Iyo yekutanga maNyika mairi haina kuburitswa paMac, saka uri mhando yekuuya nepakati nepakati nyaya mune ino inotevera. Izvo hazvina basa zvakanyanya, zvakadaro, sezvo nyaya yacho isiri yepakutanga. Iwe unotanga mutambo nekupaza kubuda mutirongo wobva waenda kunotsvaga kununura hanzvadzi yako, iyo yakaitwa muranda namambo akaipa.
Chii chinonunura II Worlds II kubva pamagetsi ndicho chimiro chakanyanya uye chiyero chemutambo. Nyika yaunofamba nayo yakakura, uye inoratidzwa nemifananidzo yakaisvonaka ye3D. Kune mitsara yemibvunzo yekuchengetedza iwe zvakabatikana uye kukubatsira iwe kuwana pfuma uye ruzivo, uye kurwisana uye unyanzvi hunoita kuti uwane rusununguko rwakakura kukudziridza unhu hwako.
zvinodiwa: Mac ne OS X v10.10, 2.9GHz Intel Core i5 processor, discrete graphics kadi ne 1GB VRAM
mutengo: £ 34.99
Pane chimwe chinhu chinoshamisira nezve Tyranny, mutambo mutsva-wekutamba mutambo uchifunga kuti "dzimwe nguva zvakaipa zvinokunda". Pakutanga kuona, Kudzvinyirira kunotaridzika zvakanyanya senge yechinyakare-yekutamba mutambo, iine yekare-chikoro isometric mifananidzo iyo vanogadzira Obsidian vanoshandisa mune yakanakisa Mbiru Dzokusingaperi. Uye, hongu, iwe une yakasarudzika sarudzo yehunyanzvi iyo inokutendera iwe kuti udzidzise semhare, wizard kana hutsinye paunofambira mberi kuburikidza nemutambo.
Asi Kudzvinyirira kunonyanya kuenda nenzira kwayo, iine kujairika set-up uye nhaurwa yenyaya iyo inonyatso kuisa kusimbisa pane sarudzo dzaunoita panguva yemutambo. Panzvimbo pekukukanda iwe muhondo chaiyo pakati pezvakanaka nezvakaipa, nyaya yeDzvinyiriri inotanga kungofanana neanoipa mukuru Kyros anopedzisa kukunda kwake kwenyika inozivikanwa seThe Tiers. Uye, pane kutamba gamba rinoponesa nyika kubva kumasimba ezvakaipa, iwe unongova 'Fatebinder', lieutenant muKyros 'uto, iye zvino anotungamira pamusoro pevakakunda maTire uye anofanirwa kukwirisa makwikwi emakwikwi emapoka akasiyana mukati uto. Iwe unongobaya munhu wese kumashure nekuzvitorera wega simba rese, kana kuyedza kuchengetedza muyero wesimba uye kutungamira imwe mhando yehudzvanyiriri hwakanaka husingareve kupwanya varimi vasina mhaka vakawanda pasi petsoka?
Kana iwe uchitsvaga kurwisa-chigunwe kurwisa kwemitambo senge Diablo saka unogona kunyadziswa, asi kana iwe uchinakidzwa nekutamba-kutamba chikamu cheRPG mitambo ipapo Tyranny ichakupa iwe nesarudzo dzakaoma nematambudziko anozoita kuti ugare wakakomberedzwa kwemaawa. panguva. Zvirongwa zvemitambo zvinyoro nyoro, zvakadaro, saka zvitarise paStam kana Mac Mac Chitoro usati watenga. Cliff Joseph
zvinodiwa: Mac ne OSX 10.9, 2GHz proto, GeForce 6000, AMD Radeon 5000, kana Intel HD 4000
Zvakaoma chero chiito-RPG kuti ibude kubva mumumvuri weDiablo 3 - iyo ichiri kuenda yakasimba mushure memakore mashanu, nekuda kweshanduro yayo yazvino yeNecromancer - asi Victor Vran anouya nemazano mashoma anoabatsira kuti abude pachena kubva kuvanhu .
Kune kutanga, vagadziri vemutambo vakasiya zvakajairika mediaeval yekufungidzira kumisikidza uye vakaisa maVictor mafambiro mune zvishoma zvishoma zvemazuva ano steam-punk-gothic nyika, uko mashiripiti nesainzi zviripo. Izvo zvinokutendera iwe kushandisa dzakasiyana siyana zvombo uye hunyanzvi, nepfuti uye magirinedhi pamwe chete neyakajairwa mapfumo nesando.
Hunhu hwekuvandudza hauna kujairika futi, sezvo iwe usisarudze imwechete yakatarwa kirasi, senge wizard kana murwi. Panzvimbo iyoyo, iwe unongosarudza chero chombo chinoita senge chakakodzera kurwa kunotevera kana muvengi, wozochitsigira nehunyanzvi hwakasiyana hwemashiripiti ayo anofambiswa ne 'overdrive' simba raunovaka panguva yekurwa.
Iko kune kunyange kadhi-mutambo chinhu zvakare, sezvo iwe uchigona kusarudza makadhi anopa akasiyana akasiyana akasiyana anogumbura kana anodzivirira mabhonasi. Kanda mune imwe nzvimbo yeparkour inomhanya uye ichisvetuka, uye kurwa kwemutambo kunoratidza kuve kunonakidza uye kunetsa, apo iwe uchitsvaga kuti ndeupi mubatanidzwa wezvombo nehunyanzvi zvinoshanda zvakanyanya, zvese mune imwechete-mutambi uye online modes.
Iyo nyaya yenyaya haina kunyatso kunyatsogadzirwa. Iwe unoshevedzwa kuguta rakazara nemadhimoni reZagoravia kwaunongofanira kuuraya matura ezvemhuka uye kuyedza kutsvaga shamwari yekare yanyangarika. Iwo anotonga kamera anogona kunge akaomarara pane dzimwe nguva, uye zvinonyadzisa kuti iwe hauna mukana wekutamba sa'Victoria Vran ', asi iyo yakasarudzika kurwa system inonakidza kwazvo, uye kune akati wandei ekuwedzera uye kuwedzera- ons anowanikwa zvakare - kusanganisira kushamisika kubatana pamwe ne-musoro-banging bhendi Motörhead iyo inogona kunge inofanirwa kuongororwa kwayo yega. Cliff Joseph
zvinodiwa: OS X 10.5 kana kuti gare gare; 4GB RAM; 512MB VRAM; 30GB inowanikwa HD nzvimbo
Wasteland 2 ndiyo imwe nzira yemutambo we1988 isingagariki, yepakutanga-apocalyptic RPG, uye kufemerwa kweMunoda kudikanwa mutsara wemitambo. Izvi zvinoitikawo kuti ndeimwe yezvinyorwa zvakakosha zveKickstarter zvakagadzirwa kuburikidza nekubatsirwa kwevanopfuura vatsigiri ve 70,000. Inoshamisa!
Nzvimbo yakasara-apocalyptic yakagara ichinyanya kudiwa yedu, uye Nyika 2 inopinda mumapadhesi ane mhepo, yakajeka uye inoita vanhu, kunyora kwakakosha uye zvizhinji zvekuita. Hondo yekutsvaga-yakagadzikana yakanyatsogadzikana uye inonetsa, uye dzimwe nguva kusangana kuchaita kuti zvikamu zvepati yako zvipere.
Kunyatsogadzirisa nekugadzirisa hurongwa kunokubatsira kuti uite zvakanaka mazano emapato ako uye unyanzvi pane zvose zvaunoda kana zvaunoda. Kune nguva dzose nzira dzakawanda dzekugadzirisa tsvina kana kupfuura musuo wakavharwa. Tsvaga kiyi, chinyengedze, chichibaya, nezvimwe.
Asi haazi ese mabara uye mashizha. Iyi RPG yakazarawo nemamishinari makuru ekuzadzisa, emibvunzo yekumusoro yekugadzirisa, mavara ekusangana uye sarudzo dzakaomarara dzekuita. Mhedzisiro yakakosha. Maguta maviri akasiyana anoda rubatsiro, uye ese ari maviri akakosha pasirese - rimwe rinopa chikafu, uye rimwe richipa mvura. Kubatsira mumwe kuchauraya mumwe, saka iwe unosarudzei? Iyi nzira yakasununguka kwazvo yepasirese uye nyaya inonakidza kwazvo uye inopa yakakwira kutsiva kukosha. Wasteland 2 ingori darn yakanaka mafaro, uye RPG mafeni haafanire kuipotsa. Jon Carr
Muroyi 2: Assassins Of Kings
Kwatenga: Mac App Store or mavambo (£ 7.49)
zvinodiwa: OS X 10.7.5 kana kuti gare gare
Price: £ 7.49 (pakutengeswa panguva yekunyora)
Muroyi 2 hapana mubvunzo kuti ndiwo mumwe wemitambo yakanakisa yekutamba makore apfuura uye, sekureva kunoita zita, ndiko kuteedzana kwemutambo wekutanga weWitcher uyo wakatanga kuvhurwa paPC muna 2007. Mitambo miviri iyi yakavakirwa pamabhuku enganonyorwa akakurumbira akanyorwa na Munyori wePoland Andrzej Sapkowski anotevera hushamwari hwaGeralt weRivia - 'muroyi' anofamba-famba muumambo hwekufungidzira weTemeria, achiuraya zvikara uye achiwanzo kuve nehutsinye.
RPG mafeni vachakurumidza kuzviwana vachikweverwa mune izvi zvakapfuma - uye kazhinji vakuru - nyaya yenyaya, asi kurwa uye hunyanzvi masisitimu akaomesesa saka iwe uchafanirwa kupa imwe nguva yekuzviziva. Vamwe vanhu vanogona kuwana kushomeka kwemhando dzakasiyana makirasi kudzvinyirira zvishoma, futi; asi nyika yakajeka yakadhirowewa yeThe Witcher 2 inokwezva kune chero munhu anofarira mitambo-yekutamba-yechikoro chekare. Iko kukosha kwakanaka, futi.
Verenga zvakazara Muchenjeri 2: Assassins Of Kings for Mac anoongorora | Tenga Muroyi 2: Assassins yeMadzimambo Enhanced Edition iye zvino
zvinodiwa: Mac OS X 10.5.8; Intel Core 2 Duo; kadhi yemifananidzo ine 256MB VRAM
Price: Free (Edition Starter); £ 8.99-per-mwedzi kubhadhara pashure. Kuwedzera kunopesana mumutengo
Mifananidzo yaro yakasarudzika haisi yekuravira kwemunhu wese, asi World of Warcraft uchiri iwo mutambo unotonga vakawanda vatambi vepamhepo pachiitiko, nevatenderi vanosvika mamirioni manomwe vachitamba sevaroyi, vapristi, varwi uye nhubu. Chikamu chebudiriro ichocho chiri pasi pekuburitswa kweakajairika ekuwedzera mapakeji, senge 2010's Cataclysm, iyo - chaizvo chaizvo - yakazungunusa iyo nzvimbo, ichiparadza dzimwe nzvimbo dzekare nekuunza nzvimbo nyowani dzaunofanira kuongorora. Yechina yekuvandudza, Mists ePandaria, akawedzera kondinendi ichangobva kuwanikwa (izere nemafungiro-anokamura panda-esque vagari), nepo yechishanu, Shongwe dzehondo dze Draenor, yakabuda munaNovember 2014.
Uku kusunungurwa nguva dzose kwezvinhu zvitsva zvinowanzoita kuti vatambi vane ruzivo vafare, asi kuti vakweke vatambi vatsva, Blizzard yakashuma Starter Edition yemutambo iyo inokubvumira kuti utambe zvekusununguka kusvikira unhu hwako hwasvika padanho 20.